Minimalist Makeup ပုံစံလိမ်းခြင်းရဲ့ အားသာချက်
11 Apr 2018 . 11:13 AM
မိန်းကလေးတွေအားလုံးမှန်သမျှ Makeup လိမ်းခြယ်ရတာကို အ၀တ်အစားတွေ ၀ယ်ရတာထက်ပိုပြီးနှစ်သက်လို့လာကြတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးဝါးတာက ကိုယ့်မှာ လုံလောက်တဲ့ Makeup Products တွေရှိပါရက်နဲ့ Collection အသစ်ထွက်တိုင်း ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ဘဲ ၀ယ်ပစ်တတ်ကြတယ်။ Makeup တွေကို ၀ါသနာအရ စုတဲ့သူတွေရှိသလို Brand တိုင်းကို လိမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီး ထွက်သမျှ Brand တွေကို လိမ်းနေတဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။
ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ Makeup ကို အားပေးကြတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Makeup Brand တွေကို စုရတာကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ ပြဿနာမရှိခဲ့ပေမယ့် Brand တိုင်းကို လိမ်းနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ ကိုယ်မျက်နှာရှေ့ရေးမကောင်းလှပါဘူး။ Makeup အများကြီး လိမ်းခြယ်ခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အရေးအကြောင်းပိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအတွက် Makeup တစ်ပိဿာလိမ်းခြယ်နေမယ့်အစား ကိုယ့်မျက်နှာလေးလည်း အမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေမယ်။ ထူထူသိပ်သိပ်ကြီးမဖြစ်ဘဲ ကြည်ကြည်လေးနဲ့ မျက်နှာလေးလည်း ၀င်းစေရမယ့် Minimalist Makeup လေးကို လိမ်းခြယ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
၂၀၁၇ခုနှစ် နှစ်ဝက်ပိုင်းမှာ Minimalist Makeup က တဖြည်းဖြည်းနေရာရလို့လာခဲ့ပါတယ်။ Minimalist Makeup ကို Sheer Makeup လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ Foundation တွေ လိမ်းတဲ့အစား Cushion လေးတွေကို ပြောင်းပြီး အသုံးပြုလာကြတယ်။ Lipstick အစား Lip Tint လေးတွေကို အသုံးပြုလာကြတယ်။ ပါးနီလေးတွေလည်း အများကြီး မသုံးတော့ဘဲ ပါးပါးလေး အသုံးပြုလို့လာကြတယ်။
လူကြီးတွေရဲ့ ပြောစမှတ်ရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းတောင်ရှိလို့နေပါတယ်။ “ပြင်လွန်းရင် ဖင်ချွန်းတတ်တယ်” ဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းပြင်လွန်းတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာကို မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ Makeup အမြဲလိမ်းနေတဲ့ မျက်နှာကို မြင်နေရတော့ Makeup မလိမ်းဘဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင် နဂိုအချောဓာတ်ခံရှိနေတဲ့ကောင်မလေးကနေတောင် ရုပ်ဆိုးမ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ Minimalist Makeup ကို လိမ်းရင်တော့ ဒီလိုမျိုး အမြင်စောင်းခြင်းတွေ၊ ကဲ့ရဲ့ ခြင်းတွေအားလုံးကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
Minimalist Makeup ပုံစံလိမျးခွငျးရဲ့ အားသာခကျြ
မိနျးကလေးတှအေားလုံးမှနျသမြှ Makeup လိမျးခွယျရတာကို အဝတျအစားတှေ ဝယျရတာထကျပိုပွီးနှဈသကျလို့လာကွတယျ။ ဒီထကျပိုဆိုးဝါးတာက ကိုယျ့မှာ လုံလောကျတဲ့ Makeup Products တှရှေိပါရကျနဲ့ Collection အသဈထှကျတိုငျး ဘာမှ မစဉျးစားတော့ဘဲ ဝယျပဈတတျကွတယျ။ Makeup တှကေို ဝါသနာအရ စုတဲ့သူတှရှေိသလို Brand တိုငျးကို လိမျးနိုငျတယျဆိုပွီး ထှကျသမြှ Brand တှကေို လိမျးနတေဲ့မိနျးကလေးတှလေညျးရှိကွပါတယျ။
ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ Makeup ကို အားပေးကွတဲ့ မိနျးမပြိုလေးတှဖွေဈပါတယျ။ Makeup Brand တှကေို စုရတာကွိုကျတဲ့မိနျးကလေးတှအေတှကျတော့ ပွဿနာမရှိခဲ့ပမေယျ့ Brand တိုငျးကို လိမျးနတေဲ့ မိနျးကလေးတှအေတှကျတော့ ကိုယျမကျြနှာရှရေ့ေးမကောငျးလှပါဘူး။ Makeup အမြားကွီး လိမျးခွယျခွငျးက ကိုယျ့ရဲ့ မကျြနှာပျေါမှာ အရေးအကွောငျးပိုဖွဈစပေါတယျ။ ဒီအတှကျ Makeup တဈပိဿာလိမျးခွယျနမေယျ့အစား ကိုယျ့မကျြနှာလေးလညျး အမွဲတမျးလနျးဆနျးနမေယျ။ ထူထူသိပျသိပျကွီးမဖွဈဘဲ ကွညျကွညျလေးနဲ့ မကျြနှာလေးလညျး ဝငျးစရေမယျ့ Minimalist Makeup လေးကို လိမျးခွယျကွညျ့စခေငျြပါတယျ။
၂၀၁၇ခုနှဈ နှဈဝကျပိုငျးမှာ Minimalist Makeup က တဖွညျးဖွညျးနရောရလို့လာခဲ့ပါတယျ။ Minimalist Makeup ကို Sheer Makeup လို့လညျး ချေါကွပါတယျ။ Foundation တှေ လိမျးတဲ့အစား Cushion လေးတှကေို ပွောငျးပွီး အသုံးပွုလာကွတယျ။ Lipstick အစား Lip Tint လေးတှကေို အသုံးပွုလာကွတယျ။ ပါးနီလေးတှလေညျး အမြားကွီး မသုံးတော့ဘဲ ပါးပါးလေး အသုံးပွုလို့လာကွတယျ။
လူကွီးတှရေဲ့ ပွောစမှတျရှိတဲ့စကားလေးတဈခှနျးတောငျရှိလို့နပေါတယျ။ “ပွငျလှနျးရငျ ဖငျခြှနျးတတျတယျ” ဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖွဈပါတယျ။ အရမျးပွငျလှနျးတဲ့အခါကတြော့ ကိုယျ့ရဲ့ မကျြနှာကို မမှတျမိနိုငျလောကျအောငျ ဖွဈစတေတျပါတယျ။ Makeup အမွဲလိမျးနတေဲ့ မကျြနှာကို မွငျနရေတော့ Makeup မလိမျးဘဲနလေိုကျမယျဆိုရငျ နဂိုအခြောဓာတျခံရှိနတေဲ့ကောငျမလေးကနတေောငျ ရုပျဆိုးမ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ Minimalist Makeup ကို လိမျးရငျတော့ ဒီလိုမြိုး အမွငျစောငျးခွငျးတှေ၊ ကဲ့ရဲ့ ခွငျးတှအေားလုံးကို ပွောငျးပွနျလှနျပဈနိုငျပါတယျ။
by Editor .7months ago
by 2B .7months ago
iPhone XS ရဲ့ ညဘက်ဓါတ်ပုံတွေကို Night Sight နဲ့ အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ Google
by Zawyè .7months ago